Guddoomiyaha baarlamanka Galmudug State oo Booqasho ku jooga Toronto | KEYDMEDIA ONLINE
Guddoomiyaha baarlamanka Galmudug State oo Booqasho ku jooga Toronto
Waxaa magaalada Toronto si aan hore loo arag loogu soo dhaweeyay Guddoomiyaha baarlamanka Galmudug mudane Hassan Mahamud Hail iyo Abdirasaq Ahmed Hassan yere oo ah xubin aad u firfircoon degenna Minnesota, Walaalaha somaliyeed ee rer Toronto oo xalay si cajiib ah usoo baxay waxay kalliftay qaar kood in ay noqdaan kaddib markuu buux dhaafay Hoolkii shirka lagu qabanayay.
Waxaa goobta ka hadlay dad aad u fara badan, qabayna aragtiyo isku dhowdhow,
Reer Toronto fariintooda waxay aheed in nabadda la xoojiyo, loo dhug la haado dan yarta, Tacliinta kor loo qaado, ummadda aan la kala soocin, danta guud iyo tan qarankana laga shaqeeyo.
Haddaan ka soo qaadanno wax yar hadalkii Hassan, wuxuu noo sheegay mudadii yareed uu maamulka Galmudug dhisnaa in la qabtay wax farabadan, sida soo celinta nabadda, walaaleenta beelaha wada dago, waxaa la dhisay/la dayac tiray afartan school , oo saddax ka mida ay tahay dugsi sare. Waxaa September, furmayo jaamacadda Galkacyo, sidoo kale waxaa wax laga qabta xagga biyaha, anagoo soo koobi Karin khudbaddii Hassan wuxuu u danbayntii u mahad celiyay walaalihii sida diiran u soo dhaweeyay, una sheegay in uu qaadi doono fariimihii ay u soo jeediyeen reer Toronto.
Dr. Maxamed Cali - keydmedia.net